Deni oo soo jeediyey hab cusub oo lagu ciribtiri karo Shabaab – Kismaayo24 News Agency
by admin 30th January 2020 094
Madaxweynaha Puntland Saciid C/llaahi Deni oo ka hadlayay munaasabad soo dhoweyn ah oo loogu sameeyay magaalada Nairobi isaga iyo wafdiga uu hoggaaminayay ayaa sheegay in dadka xagjirka ay caqabad ku yihiin nabadda, degenaanshaha iyo wada noolaanshaha dadka ku nool Geeska Afrika.
Madaxweyne Saciid Deni ayaa ku baaqay in meel looga soo wada jeesto, gaar ahaan Al-Shabaab, isagoo xusay haddii si qoto dheer loo fiiriyo xal waara laga gaari karo, waxaana uu tilmaamay in aad looga gaabiyay arrintaas.
“La dagaalanka fikirka Xagjirka ah iyo nabadgelyadooda ma ahan daawadooda in lala dagaalamo Militari ahana, waa in si kobac dhaqaale lagula diriro oo dadka inta la qaldayo laga gooyo”ayuu yiri Saciid Deni.
Munaasabaddii loogu sameeyay magaalada Nairobi Madaxweynaha Puntland iyo wafdigiisa waxaa ka mid ahaa xubnihii ka soo qeyb galay Ra’iisul Wasaarayaashii hore ee Soomaaliya Cumar C/rashiid iyo C/weli Cali Gaas, Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe iyo Xildhibaannada Soomaalida ee Kenya.
Xarakada Alshabaab oo weerar dhimasho sababay ku qaaddey degmada Afgooye
TOP NEWS: Madaxweynaha Masar oo Shaaca ka qaaday In Alshabaab ay ku abuurantay Faragalinta ay Beesha Caalamka ku heyso Dalka Soomaliya